ကြောက်လန့်ခိုင်မာသော: အထောက်အထားလိမ်လည်မှုနှင့်အင်တာနက် | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 1, 2007 သောကြာနေ့, မတ်လ 9, 2007 Douglas Karr
ABC ရုပ်သံ၏ ၂၀/၂၀ မှဂျွန်စတိုစယ်လ်၌တစ် ဦး ရှိသည် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကစိတ်ကူးပြပွဲ, ကြောက်လန့်ခိုင်မာသော: အမေရိကရှိစိုးရိမ်ပူပန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်မီဒီယာများ၏သက်ရောက်မှုနှင့်၎င်းနှင့်ပြည်သူလူထုနှင့်၎င်း၏ကြောက်ရွံ့မှုကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုသူကခိုင်မာသည့်အချက်အလက်များကိုပေးခဲ့သည်။
(သူလည်းရှိခဲ့ပါတယ် Freakonomics မှ Stephen Dubner ပြပွဲမှာဆိုဒါကိုငါကြည့်ရတယ်။ )
သူဖော်ထုတ်ခဲ့သောပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်တို့စိုးရိမ်ပူပန်နေသောအရာအများစုမှာအမှန်တကယ်အန္တရာယ်များမဟုတ်ပါ။ တုန်လှုပ်စေသောဥပမာတစ်ခုမှာသေနတ်တစ်လက်သို့မဟုတ်ရေကူးကန်ရှိခြင်းနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရေကန်များသည်ကလေးငယ်များအားသေနတ်များထက်များများသတ်ပစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများအားရေကန်ရှိသည့်အိမ်သို့ပို့ရန်မကြောက်ပါ။ သို့သော်သေနတ်ပါသည့်အိမ်သို့သူတို့ကိုဘယ်တော့မှပို့မည်မဟုတ်ပါ။
ဒီတစ်ပတ်မှာကြောက်ရွံ့မှုကငါနဲ့အတူနေခဲ့တယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်မဖြုန်းတီးပါ၊ သို့သော်သင်၏မိသားစုဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်သင်၏ '' ကွန်ယက် '' ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ကြီးထွားရန်အတွက်စိတ်ကူးကောင်းသောကိရိယာများပါသောလူမှုရေးကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဆိုက်၏လှည့်ကွက်မှာသင်၏မိသားစုအားလုံးနှင့်သင်နှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးများပေါင်းထည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာသည်ကျန်သူများကိုဆက်သွယ်ပြီး login လုပ်ရန်နှင့်မိသားစုကိုဆက်လက်တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မှန်ကန်သောအင်္ဂါရပ်များအားလုံးပါ ၀ င်သည့်အလွန်ကောင်းမွန်သည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၊ ကိရိယာတစ်ခု၊ အဆက်အသွယ်ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခု၊
ဒီမှာသင်ပွတ်သပ်ပါ။ သင်၏မိသားစု၏အချက်အလက်များကိုဖြည့်ပါ။ ငါပါတီတစ်ခုလုံးကိုကန်ထုတ်ပြီးကျွန်ုပ်၏မိသားစုအချက်အလက်များကိုထိုနေရာတွင်ထည့်သွင်းခြင်း၏ရူးသွပ်စွာတိတ်ဆိတ်စွာလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လျှောက်လွှာပြီးတော့ငါ့မိသားစုဝင်တိုင်းကိုဆက်သွယ်ခဲ့တယ် လူငယ်များသည်ချက်ချင်းပင်ဖမ်းမိပြီးကွန်ယက်များကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာရှေးဟောင်းလူတို့နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏မိသားစု၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုယူဆောင်လာရန်ကျွန်ုပ်အွန်လိုင်းတင်ခဲ့သည်ဟုသင်ထင်လိမ့်မည်။ ငါဒီလိုလုပ်မှာကိုသူတို့အရမ်းထိတ်လန့်သွားတယ်။ တုန်လှုပ်
အထောက်အထားခိုးယူမှု၊ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကျေနပ်မှု၊ ထောက်လှမ်းရေးနှင့်ကျွန်ုပ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုအများစုသည်ချက်ချင်းပင်မေးခွန်းထုတ်ခံခဲ့ရသည်။ လျှို့ဝှက်အီးမေးလ်များကမီးလျှံအီးမေးလ်များနောက်သို့လိုက်လာသည်။ ကျွန်ုပ်မယုံနိုင်လောက်အောင်ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်၏မိသားစုကိုစွန့်စားရမှုအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုသတိကြီးစွာ ထား၍ သတိပေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Identity Theft နှင့် ပါတ်သက်၍ စိတ်မ ၀ င်စားသော်လည်းချက်ချင်းပင်ဖျက်သိမ်းခံရသောအချက်အလက်နှင့်…အချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီသို့အမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ ဒါကဆူပူမှုကိုမရပ်တန့်စေနိုင်ဘူး ငါပြောရမယ်၊ အသက် ၃၈ နှစ်ရှိပြီ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းမှာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနောက်ကျနေမယ်၊ စပမ်ကတည်းကကွန်ယက်မှာအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်မယ်လို့မင်းထင်လိမ့်မယ်။
ငါဒီ post အတွက်လည်းအခက်အခဲရှိလိမ့်မယ်။ မကြာခင်အချိန်မကုန်တော့ဘူး။ ဒီကိစ္စကိုအများပြည်သူပိုင်ရိုက်နှက်ပြီးအဆုံးသတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော့်ကိုကယ်တင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါအလိုတော်အားလုံးချွတ်တယ်ထင်ပါတယ်
ယောဟနျသ Stossel မှန်သည်။ စီးပွားရေးနှင့်မီဒီယာတို့၏ကြောက်ရွံ့မှုများကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်လုံးဝထိန်းချုပ်မှုမရှိချေ။ အမှန်မှာ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အထောက်အထားခိုးယူမှုသည်အမှန်တကယ်ခိုးယူခြင်းထက်ငွေကုန်များစွာပေးလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်အကြွေးရှင်များ၊ အစိုးရနှင့်မီဒီယာများ၏အာရုံစိုက်မှုခံရပြီး၎င်းသည်ခဏတာအတွက်အာရုံစိုက်ခံရလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာအားလုံးဒီထဲမှာထိတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဆိုးသော အင်တာနက်မကြာခင်ငါတို့အားလုံးနဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားတော့မယ်။ ဒါကိုရပ်စရာမရှိဘူး ငါတို့ပြီးပြီ။ ကမ္ဘာကြီးကုန်ဆုံးနေပြီ။
အဆိုအရ စာရင်းအင်းအမေရိကန်အိမ်ထောင်စုအားလုံး၏ ၆၉.၄% သည်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုနေကြသည်။ ယခုအချိန်တွင်အမေရိကန်သည် ၂၁၀,၀၀၀,၀၀၀ သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှိနေသည်။ သူတို့ရဲ့အကြွေးဝယ်ကဒ်အချက်အလက်၊ သူတို့ရဲ့အကြွေးမှတ်တမ်း၊ သူတို့ရဲ့ရပ်ကွက်မြေပုံ၊ သူတို့ရဲ့လူမှုဖူလုံရေးအချက်အလက်၊ ကုမ္ပဏီရဲ့အကျိုးအမြတ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့သူတို့ရဲ့ (နီးကပ်စွာစောင့်ရှောက်ထားသည့်) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင်းတွေပါ။
wow ... ဒီနံပါတ်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Identity Theft ကြောင့်လူသန်းပေါင်းများစွာခံစားရမလား။ ကောင်းပြီ။
ထိုအဆိုအရ FTC၂ ဝဝ ၆ ခုနှစ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခိုးယူမှုတိုင်ကြားချက် ၂၄၆၀၀၀ ရှိခဲ့သည် (၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ၂၅၅၀၀၀ မှချသည်) ။ ကောင်းပြီ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုသူ ၁၀၀၀ လျှင် ၁ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ရှိမယ်။
FTC ၏အဆိုအရ Identity Theft တိုင်ကြားချက်အားလုံး၏ ၁.၉% သာအင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှိသည်။ ၄,၆၇၄ ဦး ။ ထို့ကြောင့် Identity Theft တိုင်ကြားချက်များ၏ ၉၈.၁% သည်အင်တာနက်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ သင်္ချာတွက်ကြည့်ရအောင်။ သင်၏ ၀ င်ခွင့်အထောက်အထားသည်အင်တာနက်မှ ၀.၀၂၂၂% ခိုးယူရန်ဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်လူပေါင်း ၄၅၀၀၀ မှာ ၁ ယောက်။ အချက်အလက်ခိုးယူမှုကြောင့် ၃ မှ ၆% အထိဖြစ်သွားသည် အရင်းအမြစ်မှာအများစုသည်ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင်ဖြစ်ပျက်နေပြီးအီလက်ထရွန်နစ်စနစ်ဖြင့်မဟုတ်ဘဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုးယူခြင်းခံရသည်။
ကျူးလွန်ခံရသူ၏အချက်အလက်များကိုတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်မှအီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် hack ထားသည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်ပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့သောအချက်အလက်အားလုံးတွင်တိုင်ကြားချက်တစ်ခုမျှရှာမတွေ့ပါ။ တိုင်ကြားချက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ
ကြောက်နေတုန်းပဲလား မင်းရဲ့ အလေးသာ ကားတိုက်မှုကြောင့်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာအနာဖြင့်သေခြင်း၊ သေခြင်း၊ သေခြင်းမှသေခြင်းသို့မဟုတ်သေခြင်းပင်သေခြင်းသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းလိမ်လည်မှုကိုကျူးလွန်ခံရခြင်းထက်ပိုများသည်။ တကယ်တော့လာမယ့်ရာစုနှစ်မှာဂြိုဟ်မွှားတစ်ခုဝင်တိုက်နိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေရဲ့အခွင့်အလမ်းဟာသင်အင်တာနက်ပေါ်မှာအထောက်အထားလိမ်လည်မှုရဲ့သားကောင်ဖြစ်ရတာထက်ပိုပြီးကြီးမားပါတယ်။
ဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲမှတ်ထားပါ၊ phishing စနစ်ကြောင့်အင်တာနက် identity လိမ်လည်မှုဖြစ်ပွားမှုအားလုံးသည်အများဆုံးမဟုတ်လျှင်အသုံးပြုသူသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုခိုးယူရန်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဆိုက်အတုထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ လူများသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းခိုးယူခံရသောတရားဝင်ဆိုဒ်များမှမဟုတ်ပါ။
ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ? အကြောင်းပြချက်အနည်းငယ်ရှိသည်။ သို့သော်အဓိကအချက်မှာအင်တာနက်ချွေတာရန်ကဲ့သို့ကောင်းသည် သင့်ရဲ့ဒေတာ၎င်းသည်၎င်းမှတစ်ဆင့်စီးဆင်းနေသောသတင်းအချက်အလက်အစုံအလင်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရာတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ကလေးတစ် ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုပြီးနောက်မည်မျှလျင်မြန်စွာရှာဖွေတွေ့ရှိခံရသည်ကိုသင်သတိပြုမိပါသလား။ တစ်စုံတစ် ဦး ကသင်၏ဘဏ္financialာရေးအဖွဲ့အစည်းမှစာရွက်စာတမ်းအချို့ကို ၀ က်ဘ်ပေါ်မှရယူရန်ကြိုးစားခြင်းထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
နိဂုံးချုပ်ရန်…စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ လုံခြုံရေးနှင့်မီဒီယာကုမ္ပဏီများအတွက်…ကြောက်ရွံ့မှုပေါင်းစည်းခြင်းအားလုံးကိုရပ်တန့်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မင်းရဲ့ပထမနာမည်ကိုစကားဝှက်အဖြစ်အသုံးပြုရန်နှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်များတွင်သင်၏အကြွေးဝယ်ကဒ်အချက်အလက်ကိုချန်ထားရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အကြံပေးနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်နောက်လာမည့်နေ့တွင်တရားဝင်ဆိုဒ်သို့ ၀ င်ရောက်ပြီးသင်၏ဘဏ်စာရင်းများကိုရှင်းပစ်ရန်မတွန့်ဆုတ်သင့်ပါ။ အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မလာပါဘူး စိုးရိမ်ရန် ပို၍ အရေးကြီးသောအရာများရှိသည် (သင်၏မိသားစုနှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောဆက်ဆံရေးရှိခြင်းကဲ့သို့) ။
အကယ်၍ သင်ဟာသားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရင် မည်သည့်အထောက်အထားလိမ်လည်မှုဒီမှာအချို့ အကြံ.
မတ်လ 1, 2007 မှာ 9: 18 AM
Great post ။ လူတွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့အခြေခံသတင်းအချက်အလက်တွေကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာတင်ဖို့ဘာကြောင့်နားမလည်ကြတာလဲ။ အထူးသဖြင့်အဲဒါတွေကိုအီလက်ထရွန်နစ်မဟုတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိလို့ပဲ။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်၊ လူတွေရဲ့လိပ်စာတွေ၊ ဖုန်းနံပါတ်တွေ၊ မင်္ဂလာဆောင်ရက်တွေ၊ ကလေးတွေရဲ့မွေးနေ့တွေ၊ တချို့ကိစ္စတွေမှာလစာ - ကွန်ပျူတာကိုမသုံးပဲရတယ်။ သင့်ကိုယ်သင်ပုံတစ်ပုံကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်တင်ခြင်းသည်သင်၏ SSN ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်မတူပါ။
ငါထင်မြင်ချက်ပိုဆိုးတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုံခြုံရေးဘယ်လို ဦး စားပေး (သို့ဖြစ်ကောင်းစာရင်းဇယားကြောင့်ထိုသို့သောလမ်းဖြစ်ကြောင်းကို) သို့သယ်ဆောင်ထင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ငွေများကို SSL အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်မီးတံတိုင်းပေါ်တွင်သုံးစွဲလိမ့်မည်။ သို့သော်သူတို့သိမ်းဆည်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးမည်သူမဆိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်သော့ခတ်ထားသောနေရာတစ်ခုတွင်တင်သွင်းထားသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အင်တာနက်လုံခြုံရေးကိုညံ့ဖျင်းစွာကိုင်တွယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိပေမယ့်ပျမ်းမျှအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာသူတို့ရဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ထက်သူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုံးကိုရောက်တဲ့အခါဘဏ်ထက်လုံခြုံမှုပိုကောင်းတဲ့ဘဏ်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။
မတ်လ 22, 2007 မှာ 10: 14 AM
ဒါဟာပုံပေါ် TJX ကငါ့ကိုမှားတာသက်သေပြလိမ့်မယ်…သူတို့ကခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြံဥာဏ်ကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်သူတို့စနစ်ကဖောက်ထွင်းခံခဲ့ရတယ်၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်ဒေတာခိုးယူခံခဲ့ရတယ်။ ဤခိုးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမသိရှိရသေးသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်ရာဇ ၀ င်ရှိအကြွေးဝယ်ကဒ်ဒေတာ၏အကြီးမားဆုံးသော hack ဖြစ်နိုင်သည်!
ဧပြီ 10, 2007 မှာ 3: 27 pm တွင်
ဟေ့ Doug, သိကောင်းစရာများဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင်၏စာရင်းဇယားများအားလုံးရှုထောင့်မကြည့်မချင်းအချက်အလက်များကိုအလွန်အကျွံအလွန်အကျွံထည့်ထားခြင်းကိုကျွန်ုပ်မသိရှိခဲ့ပါ။ လူတွေဟာသူတို့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုဂရုမစိုက်ပဲကူညီနေတုန်းပဲ။ ၀ က်ဘ်လိပ်စာကိုကြည့်ခြင်းကဲ့သို့သောအသေးအဖွဲများသည် phishing တားဆီးမှုကိုကူညီနိုင်သည် (Paypal အီးမေးလ်တစ်ခုကဲ့သို့သင့်အားသင်၏ခရက်ဒစ်ကဒ်အချက်အလက်များကိုပေးရန်သင့်အားပြောသော်လည်း၊ အထက်ပါလိပ်စာတွင်မည်သည့်နေရာတွင်“ paypal” မရှိပါ) ။ အနည်းငယ်သောသာမန်အသိစိတ်နှင့်သတိထားမှုသည်များစွာဝေးကွာသွားသည်။